October 2011 ~ ကိုစောဂျက်
10:55 Ko Saw 1 comment
English – Myanmar Dictionary ကို အလိုရှိတယ် ဆိုလို မနေ့က တောင်းထားလို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာ ရှိနေတာ ကြာပါပြီး။
ကိုစိုးမင်း ရေးထားတဲ့ wxPyDict ပါ။ အလိုရှိသူများအောက်ကလင့်မှာ သွားပြီး downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
10:27 Ko Saw6comments
ပစ်စပိုစ့် ရုံးက ဘော်ဒါ တစ်ယောက် တောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 100 years myanmar calendar ပါ။ (1.61 MB) ပဲ ရှိပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
downloads links က ဒီမှာပါ
ဘယ်သူဖန်းတီထားတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်လည်း မမှတ်မိတဲ့ အတွက် ပြန်မဖော်ပြပေးနိုင်တာ တောင်းပန်းပါတယ်
11:05 Ko Saw No comments
အီးမေလ်နဲ့ လှမ်းပြီး တောင်းတာလို့ တွေ့တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Corel Photo Paint X3 ပါ။ Portabl ပဲ ရလို စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ကျွန်တော်စမ်းပြီး သုံးကြည့်ပြီးပါပြီး သုံးလို ကောင်းပါတယ်။ (60.46 MB) ပဲရှိပါတယ်။ တစ်ဖိုင့်ထဲပါပဲ။ အောက်မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
The Corel PHOTO-PAINT X3 (13) Insider containsacombination of technical information and software techniques, interspersed throughout the manual. Many of these are essentially timeless - they'll be relevant 10 years from now. Other topics concern this version of the software only. To elaborate,
10:23 Ko Saw2comments
ကျွန်တော် ဆိုဒ့်မှာ Adobe Photoshop CS5 Portable မရှိသေးဘူး ဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခြားဆိုဒ်တော့တော့ များများ မှာ ရှိနေပြီးသား ဆိုတော့ မတင်ချင်တာလည်း ပါလို့ မတင်ပေးတာပါ။ အခု ဒီဟာလေက (122.77 MB) ရှိပါတယ်။ တစ်ဖိုင့်ထဲ downloads ဆွဲလိုက်ရုံပါပဲ။ နက် လိုင်း ကောင်းတဲ့ သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့။ နိုင်ငံခြားဆိုဒ်က လင့်ကနေပဲ ပွားလိုက်ပါတယ်။အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads လုပ်လိုက်ပါ။ လိုအပ်တယ် ဆိုရင် အောက်မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။ Photoshop.exe ဆိုတဲ့ icon ကို အသုံးပြုချင်တဲ့ အခါတိုင်း ကလစ် နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး သုံးရုံပါပဲ။
downloads links 1 here
downloads links2here
အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ . . . .
15:28 Ko Saw No comments
ဒါကတော့ Portable Adobe Creative Suite CS5 ပါ။ သူမှာ ပါတာတွေကတော့ အောက်မှာ ကြည်လိုက်ပါ။
Portable Dreamweaver CS5 11
Portable Adobe Illustrator CS5 v15
Portable Adobe Flash Catalyst CS5
Portable Adobe Fireworks CS5
အလိုရှိသူများ အောက်က လင့်ကနေ သွားပြီး downloads ဆွဲလိုက်ပါ။ လင့်တွေ အားလုံးကောင်းပါတယ်။လင့် မပျက်ခင် မြန်မြန် ဆွဲထားလိုက်ပါ။
ဖိုင့်က ၁၀ ဖိုင့်ခွဲပြီး တင်ထားပေးပါတယ်။ အောက်က ဟာလေးပါ မှတ်ထားလိုက်ပါအုံး။ တောင်းရင် ပေးလိုက်ပါ။ နောက်မှ မရဘူးဆိုပြီး အဆိုးမဆိုပါနဲ့။ ဟဲဟဲ
Password Mediafire : world4free.in ( downloads ဆွဲရင် Password တောင်းတဲ့အခါ ပေးလိုက်ပါ )
Password rar :KING ( ဖိုင့် ဖြည့်တဲ့ အခါ Password တောင်းရင် ပေးလိုက်ပါ )
13:08 Ko Saw No comments
games ဝါသနာရှင်များ အတွက် Samurai II Vengeance Pc Game ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တင်ထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားတစ်ပါး လူမျိုးခြားဆိုဒ်က တွေ့လို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကစားနေပါတယ်။ ကစားတဲ့ နေရာမှာ သုံးတဲ့ key တွေကနေ ထုံးစံအတိုင်း ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် ကတော့ မျှားလေတွေပါ။ တိုက်ခိုက်တဲ့ နေရာမှာ သုံးတဲ့ key ကတော့ k နဲ့ l ပါ ။ ပြီးရင် space bar ပါ သုံးပါတယ်။ ဝါသနာရှင်များ သိပြီးသားပါ။ မပြောတော့ပါဘူး။ ကစားချင်သူများ အောက်က လင့်မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
သူရဲ့ System Requirements တွေကတော့ အောက်မှာကြည်လိုက်ပါ။
သူအကြောင်းကို သိချင်တယ် ဆိုရင်တော အောက်မှာ ဖတ်ကြည်လိုက်ပါ။
ဒါကတော့ Smart Pc Pro V.54ပါ။ ကိုယ်ရဲ့ ကွန်ပြုတာမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းနေရင် ဒီဟာလေးက ကူညီပေးပါလိုက်မယ်။ဒါလည်း ဘော်ဒါ တစ်ယောက် မေးလ်က တောင်းထားလို ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်စက်မှာ စမ်းသုံးပြီးပါပြီး။ အဆင်ပြေပါတယ်။ အောက်မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
သူရဲ့ Registered name နဲ့ code ကိုတော့ အောက်မှာပဲ ရေးထားပေးပါလိုက်မယ်။
သူအကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိချင်တဲ့ ဆိုရင် အောက်မှာ ဖတ်ကြည်လိုက်ပါ။
14:57 Ko Saw 1 comment
ဒါကတော့ Adobe Photoshop CS6 ပါ။ နောက်ဆုံးထွတ် ဗာရှင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင် အောက်မှာ သူအချက်အလက်တွေကို ကြည်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads လုပ်လိုက်ပါ။
The Latest Serial Number Photoshop CS6
17:00 Ko Saw3comments
ဒါကတော့ နောက်ဆုံးထွက် ဗာရှင်း Corel Draw Graphics Suite X5 ပါ။ Keygen ပါ တစ်ခါထဲ ထည့်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း လက်ရှိ Corel Draw Graphics Suite X5 ကိုပဲ သုံးနေပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။ တစ်ဖိုင့်ထဲ ပါပဲ ။ 486 MB ရှိပါတယ်။ ဒေါင်းပြီးရင် အိပ်ပြီး စောင့်နေလိုက်ပေါ့။
CorelDRAW Graphics Suite X5 : KeyGen